Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia oo ka hadlay qoondada Soomaalida ku leeyihiin Shidaalka Ethiopia
August 3, 2018 warsame	0 Comments
Abiy Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrin aad loo hadal hayay oo ku saabsan qoondada dadka deegaanka Soomaalida ay ka helayaan shidaalka laga soo saaray deegaankaas.
Dr Abiy oo dad badan kula hadlayay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa ka jawaabay su’aal ahayd “Dhinaca deegaanka soomaalida Itoobiy waxaa la iga weydiiyey dad badan oo shacabka dambiya ka galay ay jira maxaad ka damacsan tihiin, oil and gas iyo arrinta deegaanka shidaalka laga helay iwm?”.
Dr Abiy ayaa ku jawaabay “Walaalaheen deegaanka soomaalida waxaan u sheegay in ka badan 5 goobood ayaa Itoobiya shidaal laga helay, arrintu meesha taagan ma aha inaan ku faanno anigu shidaal baan helay, anigu bun baan leeyahay anigu biyaan leeyahay ee muhiimaddu waxaa weeyey sideen kheyraadkaasi meel isugu geeyna oo aan uga wada faa’ideysanna”.
“Sababta oo ah kunki sano ee la soo dhafay iyo 60 sana ee ugu dambeeysay ee shidaalkan la baadhayeyba shidaalkaas inu biya yahay inuu ciid yahay lama ogeyn.Hadda marka uu wixi uu shidaal noqday haddii aan dhahno dhulkeyga ayaa laga helay iyo waxyaaba noocaa natiijada ka dhalan karto waa inaan isleyno oo keli ah taana wax faa’ida ah malahan” ayuu intaasi ku daray ra’isul wasaaraha.
Dr Abiy ayaa sheegay in kheyraadka dhulka Itoobiya uu yahay mid dadka oo dhan ay leeyihiin, wuxuuna sheegay qoondada ay yaalan karaan dadka Soomaaliya ee degan meelaha shidaalka laga heley, wuxuuna yiri “Hase yeeshee, iyada oo aan deegaanka Soomaalida oo keli ah loo eegeyn kheyraad kasta oo dabiici ah oo laga helo deegaan kasta 5-10% waxa lagu hormarinayaa deeganka kheyraadka laga helay, arrintaasina waa mid caada u ah oo ay ku dhaqmaan waddama badan oo ka tirsan qaaraddan Afrika”.
Sheekh Ibraahim Dheere oo ahaa guddoomiyihii jabhaddii hubeysnayd ee heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa
Sheegay in la xaddidaa qoondo la’isla ogyahay , sidoo kale dadka deegaanka waa in laga shaqo galiyaa mashruuca, hadda waa ku yaryihiin”. Wuxuu la hadlayay BBC-da mar uu xarunta soo booqday kal hore.
← Shabakadda Marca Oo Soo Saartay Liiska Ciyaartoyda Ay Doonayaan Kooxaha Qaaradda Yurub Ugu Waaweyn.
Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u ambabaxay Sudan →